Igwe a na -atụfu ihe nke na -arụ ọrụ nke ukwuu bụ igwe na -atụfu ihe
Igwe a na-awụsa ọtụtụ ihe n'otu oge na-akpụ igwe ! Dumplings bụ nri kacha amasị ndị ugwu. Ha na -abụkarị ihe a na -ekewaghị ekefu mgbe ememme Afọ Ọhụrụ na ịnabata ndị ikwu na ibe. Karịsịa n'ụbọchị mbụ nke afọ ọhụrụ, otu ezinụlọ na -erikọ nri ọnụ. Enwere ike ịhụ na ntụ ọka nwere ọkwá dị elu n'obi anyị.
Akụkọ mmepe nke dumplings dị ogologo. Ruo ọtụtụ puku afọ, dumplings bụ otu n'ime nri ndị mmadụ na -amasị nke ukwuu. Ka ọ dị ugbu a, ọ nweghị onye ga -enwe mmetụta na -atụghị anya na dumplings. Ugbu a ụbọchị dị mma, iri nri mmiri aghọwo ọrụ a na -ahụkarị. Ị gaghị eri dumplings n'oge ememme opupu ihe ubi. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na -eri nri ehibela ebe a na -ere nri ntụfu na ntụ ọka dị ka isiokwu ha. N'ụzọ dị otú a, dumplings nọ ebe niile. N'ụzọ dị otú a, a na -enwewanye ndị ọrụ na -eme kuki. Site na mmepe nke ọha mmadụ na mmụba nke ọkwa akụ na ụba, ụgwọ ọrụ ndị ọrụ amụbawokwa na mmụba nke ọnụ ahịa, nke ga -eweta ụfọdụ nsogbu na ụlọ oriri na ọ dumpụ.
Igwe njupụta tebụl 900t mebere maka imepụta dumplings. Igwe a nwere ogwe njikwa ziri ezi yana ọ dabara adaba na arụ ọrụ yana ndozi ya. A na-eme ya igwe anaghị agba nchara dị elu, nke enwere ike iji ya ogologo oge, yana ụdị dịkwa oke ọkwa.
Enwere ike ịhazigharịa nha, ịdị arọ na oke akpụkpọ ahụ na nri nke dumplings nke igwe na -awụfu mmiri na -eme mgbe ọ masịrị ya, nke na -ezere ọnọdụ ọjọọ niile dị ka mgbapụta mmiri na mgbawa. Mpempe akwụkwọ a na -emepụta na -agbanwe, na -atọ ụtọ, na -enwe nri na ndidi, ma na -enwe uru karịa ma e jiri ya tụnyere ntụ ọka e ji aka mepụta.
Igwe a nwekwara ike iwepụta ngwaahịa nha dị iche iche. Ọnọdụ a bụ na enwere ike imepụta wonton, potstickers, lace dumplings, Sifang dumplings, wdg site n'ịgbanwe ebu. Enwere ike ịkpụ igwe a n'otu oge mgbe ị na -emepụta mmiri, nke nwere ike ịkwalite uru nri nri nke dumplings, mee ka ndụ adị ogologo ma zere mmejọ, Ọ bụ ezigbo igwe na -enyere ndị ahịa aka ime nnukwu ego.
Oge ezipụ: Sep-30-2021
Okwu: Obodo Xiashan, n'okporo ụzọ hongtang, district jiangbei, obodo ningbo, mpaghara zhejiang (mpaghara mmepụta A)
Ekwentị: +86 15858479773
© nwebisiinka - 2010-2019: Echekwabara ikike niile. Featured Products - Sitemap - Mobile Site
Pan-eghe steamed stuffed bun Machine , Ezinaụlọ steamed stuffed bun Machine , steamed stuffed bun Ime Machine , stuffed steamed bun Machine , steamed stuffed bun Machine , Automatic steamed stuffed bun Machine ,Ngwaahịa niile.